EaseUS Todo Backup Home 10.6 Full ( Free License Givaway ) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Backup Tools Computer software Giveaway EaseUS Todo Backup Home 10.6 Full ( Free License Givaway )
EaseUS Todo Backup Home 10.6 Full ( Free License Givaway )
Maung Pauk at 3:20:00 PM Backup Tools, Computer software, Giveaway,
Full Version Software Download and Tech News Update
Computer တွေ အသုံးပြုတာကြာလာတဲ့အခါ သိမ်းထားတဲ့ Data တွေကလည်းများ၊ System စနစ်ကလည်း ချွတ်ယွင်းလာပါတယ်.. အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Computer ချွတ်ယွင်းလို့ ကိုယ့် Data တွေပျက်စီးပျောက်ဆုံးမယ်၊ System ကလည်း အရင်အတိုင်းပြန်မရတော့ဘူး ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် Data ရော System ပါ Backup လုပ်ထားဖို့လိုပါမယ်.. အဲဒီအတွက် EaseUS Todo Backup က များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါမယ်.. EaseUS Todo Backup ဟာ နေ့စဉ် မှတ်သားနေတဲ့ Data များအပြင် System တွေကိုပါ Backup လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်.. Backup ဖိုင်တွေကို Restore ပြန်လုပ်ရလွယ်အောင် Image File (ISO) နဲ့ DVD ပေါ်မှာ သို့မဟုတ် အခြား Storage Media တစ်ခုခုပေါ်မှာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့အချိန် ချက်ချင်း ပြန်လည် Restore လုပ်နိုင်မှာပါ..
အခုကျွန်တော် မျှဝေပေးမှာကတော့ EaseUS Todo Backup Home 10.6 အတွက် တရားဝင်ပေးတဲ့ လိုင်စင်ကီးဖြစ်ပါတယ်...
1. https://www.easeus.com/giveaways/todo-backup-home-thewindowsclub.html#giveaway ကိုသွားပါ..
2. ညာဘက်အောက်နားမှာ Facebook, Google Plus, Twitter, Linkedin စတဲ့ Social Media တစ်ခုခုနဲ့ Like ဖြစ်ဖြစ်၊ Share ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးရပါမယ်.. ပြီးရင်တော့ ကီး နဲ့ Software Download Link ရပါမယ်.. Software ကိုဒေါင်းပြီး Install လုပ်ပါ.. ကီးဖြည့်လိုက်ပါ..
3. အောက်ကပုံလို ကုဒ် ၂ ခုမြင်ရပါမယ်.. အဲဒီကုဒ် ၂ ခုကို မှတ်ထားပါ.. ပေါ်နေတဲ့ Dialog Box ကို မပိတ်ပစ်နဲ့အုံး..
4. http://activation.easeus.com/alloffline.php ကိုသွားပါ.. License Code နဲ့ Machine Code ကိုဖြည့်ပြီး Submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. Activation Code ရလာပါမယ်..
5. ရလာတဲ့ကုဒ်ကို ခုနက Activate လုပ်တဲ့ Dialog Box မှာဖြည့်ပေးလိုက်ပါ.. 29 ဒေါ်လာတန် EaseUS Todo Backup Home 10.6 ကို တရားဝင်လိုင်စင်နဲ့ Home Edition 10.6 ကို Full Version သုံးနိုင်ပါပြီ..
Computer တှေ အသုံးပွုတာကွာလာတဲ့အခါ သိမျးထားတဲ့ Data တှကေလညျးမြား၊ System စနဈကလညျး ခြှတျယှငျးလာပါတယျ.. အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ Computer ခြှတျယှငျးလို့ ကိုယျ့ Data တှပေကျြစီးပြောကျဆုံးမယျ၊ System ကလညျး အရငျအတိုငျးပွနျမရတော့ဘူး ဆိုတာမြိုး မဖွဈရလအေောငျ Data ရော System ပါ Backup လုပျထားဖို့လိုပါမယျ.. အဲဒီအတှကျ EaseUS Todo Backup က မြားစှာ အထောကျအကူဖွဈစပေါမယျ.. EaseUS Todo Backup ဟာ နစေ့ဉျ မှတျသားနတေဲ့ Data မြားအပွငျ System တှကေိုပါ Backup လုပျထားနိုငျပါတယျ.. Backup ဖိုငျတှကေို Restore ပွနျလုပျရလှယျအောငျ Image File (ISO) နဲ့ DVD ပျေါမှာ သို့မဟုတျ အခွား Storage Media တဈခုခုပျေါမှာ သိမျးဆညျးထားနိုငျပွီး လိုအပျတဲ့အခြိနျ ခကျြခငျြး ပွနျလညျ Restore လုပျနိုငျမှာပါ..
အခုကြှနျတျော မြှဝပေေးမှာကတော့ EaseUS Todo Backup Home 10.6 အတှကျ တရားဝငျပေးတဲ့ လိုငျစငျကီးဖွဈပါတယျ...
1. https://www.easeus.com/giveaways/todo-backup-home-thewindowsclub.html#giveaway ကိုသှားပါ..
2. ညာဘကျအောကျနားမှာ Facebook, Google Plus, Twitter, Linkedin စတဲ့ Social Media တဈခုခုနဲ့ Like ဖွဈဖွဈ၊ Share ဖွဈဖွဈ လုပျပေးရပါမယျ.. ပွီးရငျတော့ ကီး နဲ့ Software Download Link ရပါမယျ.. Software ကိုဒေါငျးပွီး Install လုပျပါ.. ကီးဖွညျ့လိုကျပါ..
3. အောကျကပုံလို ကုဒျ ၂ ခုမွငျရပါမယျ.. အဲဒီကုဒျ ၂ ခုကို မှတျထားပါ.. ပျေါနတေဲ့ Dialog Box ကို မပိတျပဈနဲ့အုံး..
4. http://activation.easeus.com/alloffline.php ကိုသှားပါ.. License Code နဲ့ Machine Code ကိုဖွညျ့ပွီး Submit ကိုနှိပျလိုကျပါ.. Activation Code ရလာပါမယျ..
5. ရလာတဲ့ကုဒျကို ခုနက Activate လုပျတဲ့ Dialog Box မှာဖွညျ့ပေးလိုကျပါ.. 29 ဒျေါလာတနျ EaseUS Todo Backup Home 10.6 ကို တရားဝငျလိုငျစငျနဲ့ Home Edition 10.6 ကို Full Version သုံးနိုငျပါပွီ..
EaseUS Todo Backup Home Key Features:
System snapshot offersafast system state backup and recovery solution.
Clone or transfer hard disk to another
Backup options: image split, image compression, set priority, email notification, etc.
Download available for: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10.
Backup Tools, Computer software, Giveaway
Backup Tools Computer software Giveaway
၅ ထဲကနေ ၂ ကိုနုတ်တာ ဘယ်လောက်ရလည်း ဂျပန်ဟာသ ခွီးနေရ...
တံခါးတစ်ပေါက် နဲ့ တိုင်ပတ်နေတယ်။ ရယ်နေရတဲ့ ဂျပန်ဟာ...
ကလေးရယ် အသည်းကွဲနေပါတယ်ဆို ဆေးကြီးကြီး ထိုးလိုက်သေ...
Shwe Htoo I Album
G Fatt အခွေသစ် 120 B
နောနော် - အိမ်မက် ထဲကလူ Album
Wordpress tutorial part 5
Wordpress tutorial part 4
ထိုင်းသီးချင်း แม่ မဲ့ အမေ
အသေ ခွီးရတဲ့ ထိုင်း အချစ်ဟာသ ဇတ်ကား ဘယ်အချိန် ကြည...
မို့မို့ မျက်စိမှိတ်ချစ်နေမယ် Moh Moh Myat Si Mh...
ဆူခိုထိုင်းအသင်းနှင့် ပွဲစဉ်တွင် အနိုင်ဂိုးသွင်းယူ...
ကျော်ဟိန်း ဘုံပြတ် ဘမောင် စဆုံး
Wordpress tutorial part 2
ကျော်ဟိန်း - မာန်ရဲ့ဒဏ် ( မြန်မာ့ရုပ်ရှင် )
မို့မို့ - ချစ်သူသို့(Moh Moh Chit Thu Tho Album)
အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူ ရဲ့ ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာဆိတ်ဖွား (...
ကျော်ဟိန်း ကြိုးတန်း စ ဆုံး
ကျော်ဟိန်း နွားတစ်ထောင် ( မြန်မာရုပ်ရှင်)
ခင်မောင်တိုး လက်ရွေးစင်းများ Vol 7
ခင်မောင်တိုး လက်ရွေးစင်းများ Vol 6
ခင်မောင်တိုး လက်ရွေးစင်းများ Vol 5
ခင်မောင်တိုး လက်ရွေးစင်းများ Vol 4
ခင်မောင်တိုး လက်ရွေးစင်းများ Vol 3
ခင်မောင်တိုး လက်ရွေးစင်းများ Vol 2
ခင်မောင်တိုး လက်ရွေးစင်းများ Vol 1
Easy money $$$ 99 9% Dice Dogecoin Gambling
Android App တွေ အလွယ်တကူ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ B4A (Basic...
EaseUS Todo Backup Home 10.6 Full ( Free License G...
Ashampoo Music Studio 2018 Pro ( 1 Year License Fr...